TOP 9 lifhaki for baking | NASASHADA - 2018
TOP 9 inta uu nool yahay oo la dubayo
Subagga caadiga ah
2. Wixii chips shukulaatada
3. Proteins oo aan lahayn jaallo
Marka aanay jirin sirinjir macaan
Saxanka caaga ah ee la dubay
Doofaarka iyo lowska had iyo jeer waa ay sareeyaan
Qalabka ilkaha ma aha mid loogu talo galay
Iska yaree macmacaanka kulul
Video TOP 9 Nolol wakhti la dubayo
Malaha badanaa, dad badan ayaa isku raaci doona in cunnooyinka caanaha iyo keegga ay waxyeello u yeeshaan, maadaama ay si xun u saameynayaan tirada. Hase yeeshee, haddii aanad ku xad-gudbin buugaagkan, xitaa haddii aad guriga ku dubto, iyada oo aan kiimiko aheyn iyo waxyaabo kale oo waxyeello leh, ka dibna caanahaas ayaa suurtagal ah in ay carqaladeeyaan qoyskooda. Xulashada nooceeda ah ee maanta ee nafta jilicsan ee kuwa jecel in la kariyo. Fududeeyee geedi socodka dubista oo ku raaxeeyso roodhi macaan iyo macaan.
Waxyaabahan waxaa lagama maarmaan ah in lagu daray cajiinka. Si kastaba ha ahaatee, had iyo jeer ma aha mid gacanta ku leh subagga cufnaanta lagama maarmaanka ah. Si aad u oggolaato subagga inuu u dhaqo si dhakhso ah, u googooyo gogo 'yaryar oo ku dabool saxan kulul. Ka dib daqiiqadaha 5 waxaad awoodi doontaa inaad ku darto saliida imtixaanka, maadaama ay noqon doonto mid jilicsan oo jilicsan.
Habka ugu caansan ee loo qurxiyo macmacaanka waa chips shukulaato. Isku day in aad qallajisid fareeshka baradhada shukulaatada iyo fiiri nooca qurxinta ee aad heli doonto.
Badanaa cuntooyinka waa in ay kala soocaan waxyaabahan. Si aad tan u samayso si guul leh u isticmaal dhalada caag ah. Goobta ukunta, ka dibna ku dheji qajaar la qoorta.
Mararka qaar waxaan illownaa inaan iibsano waxyaabahan muhiimka ah sida saliingaha macmacaanka. Bacaha balaastigga ah ayaa iman doona badbaadada, hal gees oo u baahan in la gooyo. Oo haddii aad daloolka ku dhejisid qoyan, kareemka dibedda ah ayaa u soo baxaya si ay u xirxiraan.
Ma haysataa hal foom oo keliya? Samee shumac shumac, oo waxay heli doontaa cabbirka aad u baahan tahay.
Badanaa maaddooyinkaas ayaa ku dhajiya xagga hoose ee cajiinka. Kala soocii hore ee bur - taasi waxay u qaybin doontaa si siman.
Si aad u tijaabiso, in roodhida diyaar u tahay diyaar u noqoshadu waxay ku fiican tahay sheyga ama ciyaarta. Haddii cajiinka uusan ku sii socon ciyaarta, ka dibna dubista waxaa laga soo saaraa foornada.
Way ku habboon tahay in la jarjiro macmacaanka iyadoo la adeegsanayo qalabka ilkaha. Lakabyada keegga lama kala soocayo, maaddaama mawduuca si fudud u jarayo wax kasta oo joogtada ah.
Haddii aad u baahato in aad jarjartid macmacaanka kulul, ku rid mindi qaboojiyaha.
Sidee loo iibsadaa dhammaan alaabooyinka loogu talagalay dadka macmalka ah, iyagoo aan guriga ka tegin?
Ma suurtogal in la siiyo farmaajada cunnida caanaha caruurta
Xeerarka aasaasiga ah ee samaynta macaanka
Sida loo karsado ama u iibsato pizza Margherita?
Tilmaamaha qaadashada geocupola
Dukaanka internetka ee kabaha dumarka - kabaha ugu caansan ee Yurubta
Sida loo doorto gaadiidka ilmaha iyo waxa la raadinayo
Sida loo qalabeeyo qolka degan oo casri ah
Maxay faa'iido u tahay in laga iibsado guri cusub oo ka yimaada horumariyaha?